बालबालिकालाई घरमा एक्लै छोड्दा के गर्ने ? « Mero LifeStyle
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रुपमा फैलिएसँगै स्कुलहरु बन्द छन् । निषेधाज्ञाले अफिसहरु पनि बन्द भएपछि अविभावकहरु आफ्ना बालबालिकासँग घरमै छन् । निषेधाज्ञाको समयमा बच्चाहरुले आफ्ना अविभावकसँग प्रशस्त समय बिताउने अवसर पनि पाएका थिए ।
कोरोना संक्रमण दर क्रमशः कम हुँदै गर्दा सरकारले लुजडाउन गरेको छ । धेरै अफिस खुल्न थालिसके । तर, विद्यालयहरु कहिले खुल्छन् भन्ने टुङ्गो छैन । यद्यपि, बालबच्चालाई घरमा एक्लै छाड्दा केही सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । त्यसो त बालबालिकालाई घरमा एक्लै छोड्दा के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारेमा बाल मनोरोग विशेषज्ञ डा. अरुण कुँवरको सुझाव यस्तो छ ।
बालबालिकालाई घरमा एक्लै छोड्दा पर्न सक्ने असर
बालबालिकालाई घरमा एक्लै छोड्दा आत्तिने, टोलाउने, रिसाउने, झर्कने, जिद्धि गर्ने र केही बच्चाहरु त धेरै आत्तिएर अचेत अवस्थामा समेत पुग्छन् । साथै, बच्चाहरु झिँजो मान्ने, रोइराख्ने, रिसाउने, बाबाआमासँग झुम्मिरहने र अभिभावकलाई छोड्नै नचाहने पनि गर्छन् । झगडा गर्ने, दुःख दिइराख्ने, भनेको नमान्ने जस्ता समस्याहरु पनि देखिन सक्छन् ।
बच्चाहरु धेरै खेल्ने र उफ्रिने कारणले चाँडै थाक्छन् । त्यसैले बाबुआमा घरबाहिर निस्कँदा बालबच्चाले भेट्ने ठाउँमा खानेकुरा र पानी राखिदिनुपर्छ ।
छिमेकीलाई जानकारी दिने
घरमा बच्चालाई एक्लै छोड्दा छिमेकीलाई घरमा बच्चा एक्लै छ भनेर जानकारी गराउँनु पर्छ । जानकारी दिएपछि उनीहरुले बेला–बेलामा बच्चालाई बोलाउने र हेर्ने गर्छन् । जसले गर्दा केही मात्रामा भए पनि उनीहरु सुरक्षित हुन्छन् ।
बालबालिकाको सम्पर्कमा रहने
बालबालिकाहरु घरमा एक्लै हुँदा उनीहरुसँग मोबाइल हुनु अति आवश्यक छ । घरमा उनीहरुलाई एक्लै छोड्दा केही समस्या पर्यो भने अभिभावकलाई फोनमार्फत जानकारी गराउन सिकाइयो भने उनीहरु सुरक्षित हुन्छन् । यसरी छोराछोरीसँग लगातार सम्पर्कमा बस्ने र उनीहरु के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ ।
यदि आफू घरमा नभएको बेला बच्चाले उपद्रो गर्लान् वा बाहिर बरालिएर हिँड्लान् भनेर चिन्तित भइन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई होमवर्क दिएर जाने गरौं । जसले गर्दा उनीहरु त्यसैमा व्यस्त रहुन् । र, घरबाहिर निस्किएर नबरालिउन् ।
घरको काम गर्न दिने
घरको काम गर्न दिने, आफ्नो काम आफैं गर्न लगाउने, तरकारी केलाउन, सफा गर्न, आफ्ना कपडा धुन लगाउने गर्नु पर्छ । उनीहरु घरको काममा व्यस्त भए भने पनि बाहिर निस्कन पाउँदैनन् ।
दैनिक कार्य तालिका बनाउने
दैनिक कार्य तालिका बनाउने, जस्तोः पढ्ने, खेल्ने, खाने, सुत्ने, टिभी हेर्ने तालिका बनाएर गराउने । यसो गर्दा उनीहरु धेरै समय एउटै काममा अल्झिएर बस्न पाउँदैनन् । र, उनीहरुमा समय अनुसार चल्ने बानीको पनि विकास हुन्छ । बालबालिकामा पर्ने यस्ता समस्याहरुले उनीहरुलाई मानसिक तनाव पनि हुन सक्छ । त्यसैले बालबालिकाहरुलाई संयुक्त परिवारमा राख्नु पर्छ ।
जसले गर्दा उनीहरुले परिवारका सदस्यहरुसँग लामो समय बिताउन पाउँछन् । र, उनीहरुलाई एक्लोपन महसुस हुँदैन । बच्चाहरुलाई घरमा एक्लै छोड्दा उनीहरुलाई चोटपटक पनि लाग्न सक्छ । केही नराम्रो दुर्घटना भएको खण्डमा पछुतो गर्नु भन्दा पहिले नै सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।
#डा. अरुण कुँवर
#बाल मनोरोग विशेषज्ञ